डडेल्धुरा अस्पतालमा प्रहरी सुरक्षामा ओपीडी सेवा सुरु - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ सुदूरपश्चिम प्रदेश ∕ डडेल्धुरा अस्पतालमा प्रहरी सुरक्षामा ओपीडी सेवा सुरु
डडेल्धुरा अस्पतालमा प्रहरी सुरक्षामा ओपीडी सेवा सुरु
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७६ असार २ गते, १२:२९ मा प्रकाशित
अमरगढी—सुत्केरीको मृत्युपछि तनावग्रस्त बनेको डडेल्धुरा अस्पतालको ओपीडी सेवा सञ्चालनमा आएको छ । सामूहिक रुपमा सोमबारदेखि डाक्टरहरु ओपीडी सेवामा फर्किएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले जानकारी दिए ।
अहिले डाक्टरहरु सुरक्षा घेराभित्रबाट अस्पताल बाहिरबाट सामूहिक ओपीडी सेवा दिइरहेका छन् । तर, चिकित्सकहरुमा अझै पनि मानसिक रुपमा सन्त्रास कायमै रहेको डा. कँडेलले बताए । असुरक्षाको कारण देखाउँदैं आइतबार अस्पतालमा कार्यरत ११ जना चिकित्सकसहित ३४ जना स्वाथ्यकर्मी र कर्मचारीहरुले सामूहिक विदामा बस्ने घोषणा गरेका थिए । तर, साँझपख प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अमरगढी नगरपालिकाका मेयर, राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधी र डाक्टर तथा कर्मचारी सम्मिलित बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकमा प्रशासनले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने आश्वासन दिएपछि डाक्टरसहित स्वाथ्यकर्मी र कर्मचारीहरु काममा फर्किएका हुन् । ३१ जेठमा डडेल्धुरा अमगरगढी—६ की २५ वर्षीया गीता ताम्राकारको शल्यक्रियाका क्रममा मृत्यु भएपछि विरामीका आफन्तले चिकित्सकले उपचारमा लारवाही गरेको भन्दैं प्रदर्शन गर्नुका साथै अस्पतालमा तोडफोड गरेका थिए ।
त्यसपछि स्थिती तनावग्रस्त बन्दैं गएपछि आइतबार डडेल्धुरा अस्पतालका चिकित्सक, स्वाथ्यकर्मी र कर्मचारीहरुले सामूहिक विदामा बस्ने घोषणा गरेका थिए । उनीहरुले स्थानीय प्रशासनले स्थिती सामान्य बनाउन पहल नगरेको गुनासो गरेका थिए । तर, आइतबार बेलुकाका बैठकपछि भने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरु सेवामा फर्किन राजी भएका थिए ।